Mpanofa fiara mpanofa - ny fiaranao amin'ny PRICE TSARA?
Mila fiara manofa ve ianao? Tonga eo amin'ilay pejy tadiavinao ianao avy eo. Ampiasao ny mpitady fanofana fiara ary mahazo iray amin'ny vidiny tsara indrindra ary amin'ny fiantohana rehetra azo antoka.
Masinina fikarohana momba ny fanofana fiara
Ambony amin'ireo tsipika ireo ho hitanao ny motera fikarohana maherinay izay hanampy anao hahazo antoka tsara indrindra. Tsotra be ny fampiasana azy, ampidiro fotsiny ny toerana fanangonana, mariho ny datin'ny fanangonana ary miverena ary mila mitady fotsiny ianao dia hanana ny tolotra fiara manofa tsara indrindra eo am-pelatananao.
1 Masinina fikarohana momba ny fanofana fiara
2 Manofa fiara
3 Tombony amin'ny fanofana fiara
4 Manofa fiara an-tserasera
4.5 hanao kayak
5 Ahoana ny fiasan'ny motera fikarohana an-tserasera
6 Afaka manofa fiara ve aho tsy manana carte de crédit?
7 Ahoana ny fiasan'ny fanofana fiara eo amin'ny tsirairay?
Iray amin'ireo ahiahy matetika mitranga rehefa manomana ny diantsika izahay, indrindra raha lehibe izy ireo, dia inona no tokony hatao raha manana ny tsy maintsy ataontsika isika mila manatanteraka làlan'ny fahasarotana iray na fitsangatsanganana any amin'ny tanàna hafa.
Betsaka ny mandositra ny fampiasana fitateram-bahoaka, na noho ny tsy fisian'ny fampiononana sy fahalalahana amin'ny resaka fandaharam-potoana, sns. midika izany, na noho ny fiakarana vokariny amin'ny fandaniana na tetibola. Na izany aza, tsy mora foana ny mivezivezy amin'ny fiaranay, any no misy ny hevitry ny fiara manofa.
Mety ho tamin'ny voalohany, ny fanofana fiara dia asa somary sarotra, saingy tsy misy zavatra lavitra amin'ny fahamarinana. Manaraka izany, manazava sy manampy anao amin'ny fomba fanaovana azy izahay. Ary raha te hahazo ny vidiny mora indrindra ianao mila tsindrio fotsiny eto.
Tombony amin'ny fanofana fiara
Ny manapa-kevitra ny hangataka fiara manofa mandritra ny dia dia mety hanana tombony lehibe:
Libertad ny fandaharam-potoana hifindra sy hifindra.
ben'ny tanàna Ampionòny.
Làlan'ny drafitra arakaraka ny filanao.
fahavaratra, satria manofa fiara, raha tsy fiara avo lenta, dia mety manana vidiny eo anelanelan'ny € 5 sy € 15 isan'andro. Na izany aza, raha nisafidy fitateram-bahoaka izahay dia ho avo kokoa io vola io.
Mahay mitondra a valizy betsaka kokoa.
Manofa fiara an-tserasera
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny tambajotra dia ahitantsika orinasa marobe natokana ho an'ny fanofana fiara izay manome antsika ny mety hangataka ny serivisin'izy ireo an-tserasera tanteraka. Saingy tsy mifarana eto ilay zavatra, fa manana safidy hafa koa isika toy ny pejin-tranonkala samihafa izay manome antsika motera fikarohana izay manara-maso ny franchise samihafa natokana ho an'ity sehatra ity mba hampisehoana amintsika ny tsara indrindra.
Anisan'ireo malaza indrindra isika:
RentalCars dia sehatra iray ahafahanao mampitaha ireo mpanome serivisy fanofana fiara rehetra hahita ny taha mora indrindra. Ny fampiasana azy dia tena tsotra, marina mila tsindrio eto ianao, fenoy ny angon-drakitra rehetra ary azonao atao izao ny mitazona ny fiara manofa anao amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ny teti-bola dia natsangana tany California, indrindra indrindra tao an-tanànan'i Los Angeles, tamin'ny 1958. Nanomboka tamin'ny asa aman-draharaha kely iray izy io izay tsy nitondra afa-tsy fiara manofa 10 fotsiny.
Androany, manana fiara, kamio ary vaneva maro karazana izy, ankoatry ny totaliny Birao 3.400 miorina amin'ny firenena 128.
Orinasa manam-pahaizana manokana amin'ny fanofana fiara any Eropa manana traikefa mihoatra ny 60 taona ary atokisan'ny mpanjifa mihoatra ny enina tapitrisa amin'ny taona 2014. Afaka mahita ny tolotra omena azy ianao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ity rohy ity.
Six.es dia serivisy amin'ny Internet izay manolotra fanofana fiara manerana an'i Espana sy any amin'ny firenena 105 mahery manerana an'izao tontolo izao. Ary izao afaka mamandrika amin'ny fihenam-bidy 10% ianao misaotra an'i AbsolutViajes tsindrio eto. Tsy ho azonao ve ilay fotoana?
Amin'izao fotoana izao, izay nanjary fitaovana ilaina tokoa i Apps mba hahatonga ny fiainantsika "ho mora", dia mipoitra i KAYAK, izay ny hanome tànana antsika dia mikendry ny hanao ny diany idealy. mampitaha ny vidiny tsara indrindra amin'ireo pejy web samihafa. Ary, mazava ho azy, manolotra antsika ihany koa ny mety hahitana ny fiara manofa izay mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika.
Ny olona tsirairay dia samy manana ny tiany avy, ka izany no anoloran'i Avis antsika a fiaramanidina lehibe amin'ny karazany rehetra: manomboka amin'ny fiara tsotra ka hatrany amin'ny matanjaka sy mihaja. Manome antsika fihenam-bidy isan-karazany matetika koa izy io. Safidy hitadidy ao an-tsaina foana, izay koa Ankehitriny dia manana tolotra 3 andro amin'ny vidin'ny 2 ianao amin'ny fikitihana eto.
Ahoana ny fiasan'ny motera fikarohana an-tserasera
Na mijery motera fikarohana isika izay mampitaha ny vidiny eo amin'ireo orinasa manofa fiara samy hafa na raha motera fikarohana ho an'ny orinasa iray dia mitovy foana ny fandidiana.
Ao amin'izy ireo isika dia hampiseho tabilao misy boaty sy safidy samihafa izay tsy maintsy nofenointsika. Voalohany indrindra, tsy maintsy asehontsika ny toerana izay mahaliana antsika haka ilay fiara. Aorian'izay, hanondro ny daty fanangonana sy ny fandefasana azy izahay. Farany, tsy maintsy ataontsika antsipiriany ny karazana sy ny toetran'ny fiara.
Marihina fa, miankina amin'ny motera fikarohana ampiasaina, dia voatery manome karazana fampahalalana hafa isika. Na izany aza, ireto takiana voalaza etsy ambony ireto dia ireo izay miseho ho fitsipika ankapobeny amin'ny endrika karoka, ary ny mavitrika dia mazàna nohazavaina.
Afaka manofa fiara ve aho tsy manana carte de crédit?
Ny ankamaroan'ny orinasa dia tena tsy sahy mamela ny fanofana fiara amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola, fa mitaky a carte de crédit ho azy. Noho izany, mety ho lasa iraka saika tsy azo atao ny mahazo fiara manofa raha tsy misy io karazana fandidiana io.
Ny antony handavana vola an-tanana dia tena tsotra. Ny fiara dia lafo, sarotra tazomina ary, indrindra, mankafy ny fanamboarana izy ireo amin'ny tranga sasany mety ho lafo be. Izany no antony tsy maintsy hamarinan'ny orinasa fa tsy hianjadian'ny fahasimbana ateraky ny mpanjifa ny fiara, ary raha tsy tontosa izany dia tsy maintsy manandrana manamaivana azy ireo izy ireo fa tsy miteraka fatiantoka ara-toekarena. Amin'izany fomba izany dia mamorona izy ireo fiantohana mifamatotra amin'ny fanofana fiara.
Ireo fiantohana ireo dia voatazona ao anaty petra-bola amin'ny endrika vola izay homen'ny client azy raha sendra misy filàna (fahasimbana mekanika, fahatapahana, fipoahana sns.). Amin'ny carte de crédit dia mora ny mamorona an'ity karazana petra-bola ity, "manakana" ny habetsaky ny fandanjana misy izay "havoaka" rehefa alefa ny fiara.
Na dia mivoatra aza ny zava-drehetra eto amin'ity fiainana ity dia tsy hihena izany toe-javatra izany. Efa an-tanàna maro be no misy orinasa vonona hanofa ny fiarany aminay amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola. Sarotra kokoa ny amin'ny alàlan'ny Internet, saingy efa misy tranga sasany toa ny AutoEurope.
Ahoana ny fiasan'ny fanofana fiara eo amin'ny tsirairay?
Tato ho ato dia nisy revolisiona nampanofa trano. Mihabetsaka ireo orinasa tsy manolotra fiarany manokana, fa miasa amin'ny alàlan'ny tsirairay. Izany hoe ny olona liana amin'ny asa aman-draharaha na ny manao tombony azo manolotra ny fiarany manokana izy ireo hampisy azy ireo ho an'ny mpampiasa.
Misafidy ny vidiny sy ny fahafaha-manana ny tompony, ary rehefa mahazo ny fangatahana fanofana izy ireo dia misafidy izay heveriny fa mety indrindra arakaraka ny tombontsoany. Taty aoriana dia nohamafisin'izy ireo izany ary alefany ny adiresy sy ny torolàlana amin'ny fakana ny fiara amin'ny mpanofa.
Ny fiara tsy maintsy haverina foana miaraka amin'ny tanky feno solika tanteraka (toy ny tamin'ny fotoana nanaterana azy), ary miaraka, tompona sy mpanofa, zahao ny toetran'ny fiara mba tsy hisy fahasimbana sy fahasimbana hita.
Hetsika iray ataon'ny olona maro kokoa izay mitady hahazo vola fanampiny.
Ny fanapaha-kevitra hanofa fiara na karazana fiara mandritra ny diantsika dia manana safidy matotra mba ho lasa fanapahan-kevitra tsy hanenenantsika.
Tamin'ny voalohany, ary rehefa nanapa-kevitra ny hanao izany isika dia mety hanana fanontaniana an'arivony sy fisalasalana ao an-tsaintsika. Na izany aza, rehefa avy namaky ny voalaza rehetra etsy ambony, dia manantena izahay fa voavaly ireo fanontaniana rehetra ireo ary nesorina ny fisalasalana.